Zvakanakisa Android 11 Zvimiro: Maitiro Ekuti Uvawane Iwo Pane Chero Runhare 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Sezvo gore rega rega Google inogadziridza yayo Android inoshanda system kuunza akawanda anonakidza matsva uye kugadzirisa ese mashandiro anoonekwa neakamboburitswa, kutora ruzivo rwevashandisi kune imwe nhanho uye kurwira zvakaenzana nemukwikwidzi wenguva dzese, iOS. referensi sisitimu yePhones uye inowedzera kukwikwidza padivi rekugadzirisa).
Kana isu tisingakwanise kuyedza Android 11 ipapo ipapo uye tinoshamiswa neshanduro nyowani, wauya kune chairo gwara - apa isu tinokuratidza chokwadi. akanakisa maficha akaunzwa ne Android 11 uye, kuti riwedzere kukwana, tichakuratidzawo maitiro ekuwana akafanana maficha pane chero Android smartphone, saka haufanire kutenga inotevera-gen Google Pixel kana kumirira Android 11 kuti isvike panhare dzechitatu-bato.
VERENGA ZVIMWE: Isa Android 11 paWindows 10
Android 11 Feature Gwara
Sezvambotaurwa musumo, muzvitsauko zvinotevera tichakuratidza kuti ndeapi matsva akakosha anowanikwa mushanduro 11 yeiyo Android operating system uye, pachinhu chimwe nechimwe, tichazokuratidzawo kuti ungaiwana sei pane chero Android smartphone iyo ine zvirinani mhando 7.0.
Zvibvumirano zvenguva pfupi zvekushandisa
Pakati pezvakanyanya kukosha ekuchengetedza matsva mu Android 11, iyo zvibvumirano zvenguva pfupi- Kana chikumbiro chikatikumbira mvumo, chinogona kupihwa kwenguva pfupi kusvikira chikumbiro chavharwa; izvi zvichatibvumidza ipa mvumo dzakakosha chete kwenguva pfupi, pasina kutya kuti iyo application inogona kuishandisa zvakare kana isiri kushandiswa kana mushure menguva refu yechiitiko.
Kana isu tichida kuunza iri basa mune chero yazvino Android (yakaburitswa mumakore maviri kana matatu apfuura uye neiyo Android 2 kana yepamusoro) ingo tora iko kunyorera Anodheerera, inowanikwa mahara paGoogle Play Chitoro uye inokwanisa kutsiva zvachose iyo mvumo system yakavakirwa muApple, kuti ikwanise kupa zvigadziriswe zvenguva pfupi mvumo (isu tinogona zvakare kupa mvumo yenguva yakati yenguva, pamwe nekukwanisa iwe kuvhara iko kunyorera).
Zvakaitika kangani kwatiri kuti tivhare chiziviso nekukanganisa uye tisinganzwisise kuti yaive app ipi? Mu Android 11 dambudziko iri rinokundwa, nekuti pane imwe iripo nhoroondo yezviziviso zvakaonekwa pafoni, saka unogona kugara uchiziva ziviso yekunyorera kana kunzwisisa kuti ndeipi meseji isati yaverengwa.
Kugona kubatanidza nhoroondo yekuzivisa pane chero yeApple smartphone, ingo kurodha pasi application Zivisa muchengeti, Inowanikwa mahara paGoogle Play Store uye inokwanisa kuunza chiitiko ichi kunyangwe pamafoni ekare-kare (kutsigirwa kushoma kuri Android 4.4).
Na Android 11 tinogona pakupedzisira nyora zvese zvinoitika pachiratidziri kubva kufoni yedu (kugadzira magwara uye kupa rubatsiro) pamwe nekugona kwe zvakare inorekodha odhiyo kuburikidza neyakavakirwa-maikorofoni, saka haufanire kushandisa echitatu-bato kunyorera.
Sezvo kusvika Android 10 basa iri raigona kungowanikwa kuburikidza nekushandisa, takawana dzimwe nzira dzakawanda dzekurekodha sikirini kunyangwe pamafoni ekare; nekuda kweizvi tinokurudzira kuti utore chikumbiro Screen Recorder AZ, inowanikwa mahara paGoogle Play Store.
Mu Android 11, chimwe chezvinhu zvinozivikanwa kwazvo paFacebook Messenger chakaunzwa padanho rehurongwa, kureva mabhuru ekutaura (Chat mabhuru); navo tinogona gamuchira notices uye pindura kumachats uchishandisa imwe appsezvavanenge vachiwoneka semabhuru anoputika (tinya kuti upindure).
Kana isu tichida kushandisa iri basa pane chero smartphone, ingoshandisa Facebook Messenger (inowanikwa mahara muGoogle Play Store) kana, kana tichida kuiwedzera kune ese maapplication, vimba nechishandiso senge DirectChat, inowanikwawo mahara paGoogle Play Store.
Pakati pezvinhu zvitsva zveiyo Android 11 tinowanawo nyowani multimedia application control system: patinovhura Spotifty, YouTube kana zvakafanana zvinoshandiswa, a Kurumidza cheki hwindo zvakananga kubva kuApple pasi menyu, padhuze nekukurumidza marongero.
Tinogona kuunza mashandiro pane chero Android smartphone nekuisa application senge Mumvuri wesimba, inowanikwa mahara paGoogle Play Store uye inokwanisa kupa yakanyanya kugadzirirwa yebha yekuzivisa uye yeiyo skrini nekukurumidza mapfupi.
Ronga rima mode
Kunyangwe iri basa risiri rekupedzisira zvachose (riripo semuenzaniso muchizvarwa chitsva cheSamsung), Google yakagadziridza uye iine Android 11 inokutendera ronga kumisikidza yerima nzira kana yerima modhi, saka unogona kuimisa husiku kana chero imwe nguva yezuva
Mazhinji maapplication anotobvumidza iwe kuronga yakasviba modhi (kana yakasviba modhi), sekuonekwawo mugwara Maitiro ekumisikidza rima maitiro pane Android uye iOS maapplication; asi kana isu tichida kuronga iyi mode yeiyo system yese, tinogona kuvimba nechishandiso senge Chimiro chakasviba, inowanikwa mahara paGoogle Play Store.
Kunyange zvinhu izvi zvichizoita rombo rakanaka remaPixels matsva uye nemidziyo yese ichave iine Android 11 sisitimu yekushandisa, hazvireve kuti vashandisi vevashanduri vekare veApple vanofanirwa kusiiwa kumashure! Nemapurogiramu atakakurudzira, tinogona kunyatso kubatsirwa kubva pazvinhu zvinonakidza zveApple 11 tisingatengi kutenga Google Pixel kana chero nhare yechizvarwa nyowani ine Android 11 yakabatanidzwa.
Kana isu tichida kutora iyo nyowani Android 11 chero zvodii, tinokurudzira kuti uverenge vatungamiriri vedu Android inogadziridza: ndiani anokurumidza pakati peSamsung, Huawei, Xiaomi nevamwe vagadziri? mi Tarisa uone zvekuvandudzwa paHuawei, Samsung uye Android mafoni.